Yueqing Jiesheng Izixhobo Co., Ltd.
Amava eminyaka engama-30 ekwenziweni nasekuthengisweni kweebhithi zokomba
I-Yueqing Jiesheng-uphawu oludumileyo lwehlabathi lwezixhobo zehardware.
Iminyaka engama-30 ikhula ngamava kushishino oluncinci.
Amandla okwenza ulwenziwo oluntsonkothileyo kwishishini lakho lesicelo.
Yueqing Jiesheng Izixhobo Co., Ltd. yasekwa ngonyaka ka 1989. Yinkampani yokuvelisa kunye neyorhwebo yezixhobo zehardware, egubungela uluhlu olukhulu lweemveliso. Inkampani ithengisa isando sokugrumba, i-twist drill bit, i-masonry drill bit, i-router bit, i-hole- saw kunye neeblade zomhlaba.
Emva kweminyaka engaphezu kwama-30 yophuhliso oluqhubekayo kunye ezintsha, Yueqing Jiesheng uye waba ngomnye ngoovulindlela kushishino bit China ngayo. Kwinkalo yezixhobo zehardware, u-Yueqing Jiesheng useke izibonelelo zalo.
Gxila ekuphuculeni ngokwakho kunye nemveliso entsha.
U-Yueqing Jieshengeneemfuno ezizodwa kwi-R & D, imveliso kunye nokuthengiswa kwemingxuma ye-hammer drill, i-chisel kunye ne-router bits. Umgca wemveliso ugubungela iimodeli ezingamakhulu. Iimveliso zayo zithengisela umhlaba, ngakumbi othandwayo eJamani, France, Italy, Finland, USA, Canada, Australia, Chile, Brazil, India, Russia, Vietnam, Philippines, Pakistan, South Africa nase Egypt.
UKUSUSELA NGONYAKA KA-1989
AMAZWE ANGAPHEZU KWELI-100
Umzi-mveliso oSebenzayo • Indawo yokusebenzela ekrelekrele
Kumashumi eminyaka adlulileyo, u-Yueqing Jiesheng uphendule ngokufanelekileyo kwiimfuno zentengiso zemveliso ekrelekrele. Hlanganisa izixhobo zangaphakathi zoshishino, kwaye udibanise iteknoloji yolwazi ukudala izisombululo zolawulo lweeworkshop. Ngexesha lokufezekisa imveliso ekrelekrele, ikwazisa lula ukufumaneka kwemveliso yeedatha-yexesha lokwenyani, ukutshintsha kwexesha-lokwenyani, ukubeka esweni ixesha-lokwenyani, ngokuthe ngcembe ukunciphisa ukungenelela kwabantu ngelixa kuphuculwa umgangatho wemveliso kunye nexesha lokuhambisa, kuzisa ulawulo olulula ngakumbi.
Ukujonga phambili kwikamva, u-Yueqing Jiesheng uya kubambelela kwishishini njengesixhobo esiphambili sophuhliso, eqinisa rhoqo ubuchwephesha, ukulawulwa kwezinto ezintsha kunye nentengiso entsha njengoyena ndoqo wenkqubo yoyilo, kwaye ujonge ukuba yinkokheli yeshishini elincinci.
UQHAGAMSHELWANO LWEZOKUTHENGA KWEhlabathi
Kwiimarike zaphesheya, u-Yueqing Jiesheng useke uthungelwano lwenkonzo yokuthengisa evuthiweyo kumazwe angaphezu kwe-100 nakwimimandla kwihlabathi liphela.
“Jason, njengakuqala inkonzo yakho yabathengi igqwesile. Nibahle kakhulu kwaye ukuba kuya kufuneka sitsale umnxeba uya kuba ngumnxeba wethu wokuqala. ”
“Isuntswana lokombiwa kwesando sakho se-SDS lihlala ixesha elide kwaye kulula ukugrumba umngxuma kwikhonkrithi. Kwakhona iimpahla zazipakishwe kakuhle kwaye zikhuselwe kakuhle. Enkosi kakhulu ngomzamo. ”
"Iseti yomzila ilungile kakhulu. UTomas ubalasele. Siyakuvuyela ukusebenza naye. Uncedo kakhulu kwaye uzolile. Ndinqwenela uku-odola iimveliso ezintsha kwaye ndinethemba lokubona unxibelelwano ngakumbi kwixa elizayo. ”